Olee otú iji tọghata na Ọkụ ngosi mmịfe ka DVD
> Resource> DVD> Olee Ọkụ ngosi mmịfe ka DVD
Olee otú m nwere ọkụ a ngosi mmịfe faịlụ ka DVD? Ajụjụ a e zụlitere ọtụtụ ugboro, na-Aperture ngosi mmịfe, iphoto ngosi mmịfe, ma ọ bụ PPT ngosi mmịfe. Mgbe ngosi mmịfe ka DVD e kere eke, ị nwere ike kesaa ya ọzọ mfe ma ọ bụ mma chebe ha site ọkọ. Otú ọ dị, DVD eke prorams ị ịmụta ike nwegh izute gị mkpa. Ihe ị na-eche bụ na kere DVD kwesịrị ogugu, ọ dịghị audio mmekọrịta nsogbu, na playbale na ihe ọ bụla ọkọlọtọ DVD egwuregwu. N'ezie, ngwa ngwa ọkụ na-agba bụ a gbakwunyere.
Ọ bụrụ na nke a bụ gị ikpe, ị ga-enweta a zuru okè ngwọta ebe a. Na nke a nkuzi, Wondershare Wondershare DVD Onye Okike (DVD Creator for Mac) na-na ẹkenam ina ọrụ gị mere na ịtụnanya mma. Ọ bụ a ọkachamara na Njirimara ọgaranya DVD Onye Okike software. Na ya, ị nwere ike mfe ọkụ DVD si gị ngosi mmịfe faịlụ na mgbe ahụ na-egwu ya were were on obere ma ọ bụ n'ụlọ DVD ọkpụkpọ. Ke adianade do, na ị na-enwe ike ịtọ ma ọ bụ NTSC PAL video ọkọlọtọ, 4: 3 ma ọ bụ 16: 9 video akụkụ, nakwa dị ka tinye a menu maka mfe igodo. Ugbu a free download ya ikpe mbipute na-eje ije site na n'okpuru zuru ezu ndu.
Cheta na: Na ndị na-esonụ ndu, Windows version ẹka dị ka ihe atụ. Ọkụ ngosi mmịfe ka DVD na Mac bụkwa otu ihe ahụ. Dị nnọọ jide n'aka na ị ga-esi nri version.
1 Ibu Ibu gị ngosi mmịfe videos
The ngosi mmịfe ka DVD ọkụ software atụmatụ ihe mfe iji interface. Ị nwere ike pịa "Import" ịgbakwunye gị ngosi mmịfe faịlụ ma ọ bụ nanị ịdọrọ ha ozugbo ka usoro ihe omume window. Si n'okpuru image window, ị pụrụ ịhụ na ha ga na-egosi neatly na n'aka ekpe na thumbnails. Ị nwere ike okpukpu abụọ pịa ngosi mmịfe ele na nri ihuenyo.
2 Mee a omenala DVD menu (nhọrọ)
Dị ka e kwuru, mee ka gị na ngosi mmịfe faịlụ mfe ịnyagharịa, a usoro enye njikere iji 50+ DVD menu ndebiri. Ma ọ dị mkpa, pịa "NchNhr" taabụ na mgbe ahụ bulie otu ka n'ihu hazie ya. All thumbnails, buttons, ndabere image, music na ederede bụ kpam kpam customizable.
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na e nwekwara kwesịrị-eme ka ụfọdụ obere mgbanwe na-emetụ gị ngosi mmịfe. Ka ihe atụ, Kpaa, akuku, bugharia, Split, Ajust ihie, iche, wdg Dị nnọọ eji ya agbakwunyere edezi ngwaọrụ iji nweta ya mere mfe.
Pịa "Preview" bọtịnụ ego ma ọ bụrụ na ihe niile na-aga dị ka ị na-amasị (Cheta na: The kere DVD video àgwà na-abụkarị mma karịa previeing otu). Mgbe afọ ju, dị nnọọ fanye a ide DVD9 ma ọ bụ DVD5 na pịa "Ọkụ". Na mmapụta elu Ọkụ window, ịtọ gị TV ọkọlọtọ, video àgwà, na mgbe ahụ kụrụ Ọkụ agaghịkwa nke ngosi mmịfe ka DVD e kere eke.
Ugbu a, elu-ọsọ DVD Ndinam software ama-amalite ịrụ ọrụ. Na ọganihu mmanya, ị nwere ike n'ụzọ zuru ezu na-ele pasent na fọdụrụ oge. Mgbe DVD writting okokụre, diski ga-akpaghị aka idaputa ma ị nwere ike kpọọ ya na ọ bụla mgbe ọkpụkpọ DVD.
Ugbu a na ị dị nnọọ dechara-ere ọkụ gị ngosi mmịfe faịlụ ka DVD, ọ bụ n'ezie bụghị otú siri ike, nri? Ina malitere ugbu a.
Ego n'ọnụ: Olee na-atụgharị ihe ngosi mmịfe ka video:
Ị mara, mgbe ọkụ ngosi mmịfe ka DVD, ị ga-atụgharị gị ngosi mmịfe faịlụ ka video mbụ. Unu maara otú ike video n'aka ha? N'okpuru ebe depụtara ụfọdụ kearumaru ụzọ i nwere ike na-amalite:
1) PPT ngosi mmịfe: Jiri free ọrụ AuthorStream ịkọrọ gị PPT na weebụ mbụ. Mgbe ahụ, ị ga-ahụ na njikọ ibudata faịlụ dị ka a MP4 video, pịa na njikọ na-enweta ya njikere ka ọ gbaa ya ka DVD. Alternatively, i nwere ike iji na-akwụ ụgwọ software dị ka Camtasia weghara PowerPoint slides na na ịzọpụta video maka ọkụ.
2) iPhoto ngosi mmịfe: Mgbe ị rụchaa foto ngosi mmịfe Ndinam, biko pịa File> Export> ngosi mmịfe na mgbe ahụ họrọ QuickTime Movie dị ka mmepụta usoro. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enweta ihe MOV faịlụ njikere maka ọkụ.
3) Ma Aperture ngosi mmịfe, biko mụtakwuo site na nke a aticle: otú Mepụta ihe Aperture ngosi mmịfe na Ọkụ ka DVD.
Top 10 free Blu-ray burner Ngwa